Iwotshi Yonke iqale ngomdlalo olula kwiklasi yokuyila: isihloko sasiyi "wotshi". Ke, iiwotshi ezahlukeneyo zodonga zombini kunye zedijithali, ziye zaqwalaselwa kwaye zaphandwa. Umbono wokuqala uqalile ngoyena mmandla ubalulekileyo weewotshi oyikhonkco apho iiwotshi zihlala zixhonywa. Olu hlobo lwewotshi lubandakanya ipali yecylindrical apho kufakwa khona iiprojektha ezintathu. Ezi projekti zinika ezi zibini zikhoyo ngokufanayo nezo iiwotshi ze-analog eziqhelekileyo. Nangona kunjalo, bakwanenombolo yeprojekthi.
Imoto Yedashcam I-BlackVue DR650GW-2CH yikhamera ye-dashboard yemoto eqwalaselwe enesimo esilula, kodwa esineempawu ezintle kakhulu. Ukufakwa kweyunithi kulula, kwaye ngenxa yokujikeleza kwenqanaba le-360 kuhlengahlengahlengiswa kakhulu. Ukusondela kwDashcam kufutshane nesibane somoya kunciphise ukunyibilikisa kunye nokubengezela kwaye ivumela ukurekhoda okuthe tye kunye nokuzinza ngakumbi. Emva kophando olucokisekileyo ukufumana ubume bejometri elungileyo obunokuhamba ngokudibeneyo neempawu, imilo ye-cylindrical ebonelela ngezinto zozinzo kunye nokuhlengahlengiswa kukhethwe kule projekthi.
Isitulo I-Stool kumthi womsedare wendalo oqinileyo osebenza ngoomatshini be-CNC kwaye isandla sigqibile ukugxininisa ngokukodwa ukuba yenziwa ibhloko yokhuni lomsedare oqinileyo olungafakwanga u-50 x 50 umphezulu uxhonywe ngesandla ngemiqolo yesandpaper yokwenza umphezulu we-matte kwaye ucoceke ukubamba nokuphucula Iifom kunye nesikimu sombala kumthi othile womsedare kukuba kufuneka ioyile yendalo ikukhusele kwaye iyenze ibe yinto esebenzayo kwaye isebenzayo kulondolozo lwayo uyilo oluthambileyo oluxhasa izinto zendalo kunye nokongeza ivumba lazo ungathetha ngoyilo lokuchukumiseka kokuchukumisa , intuthuzelo kunye nevumba elimnandi.
I-Vase Ezi serie zevoti zisisiphumo sokuzama ngobuchule kunye nokusikelwa umda kudongwe kunye nomshicileli ozenzele okwenziwe 3D. Udongwe luthambile kwaye luyabonakala xa lumanzi, kodwa luba nzima kwaye luthambe xa lomile. Emva kokufudumeza kwi-kiln, udongwe luguqula lube yinto eqinileyo, engenamanzi. Eyona nto kugxilwe kuyo kukwakha iimilo kunye nezinto ezizizo ezinobunzima kunye nokuchitha ixesha ukwenza okanye kungenzeki kusetyenziswa iindlela zesintu. Izixhobo kunye nendlela ichaze ulwakhiwo, ubunjani kunye nefom. Yonke isebenza kunye ukunceda ukubumba iintyatyambo. Akukho zinto zimbi zongezwa.
Into Yokudlala Iphefumlelwe bubume obuguqukayo bezakhiwo zemodyuli, iMini Mech yingqokelela yeebhloko ezibonakalayo ezinokuthi zihlanganiswe kwiinkqubo ezinzima. Ibhloko nganye ineyunithi yoomatshini. Ngenxa yoyilo lwendibaniselwano kunye nezihlanganisi zemagneti, iintlobo ezahlukeneyo ezingapheliyo zingenziwa. Olu luyilo luneenjongo zemfundo kunye nokuzonwabisa kwangaxeshanye. Ijolise ekuphuhliseni amandla endalo kwaye ivumela iinjineli ezincinci ukuba zibone umatshini wenyani nganye nganye kwaye ngokudibeneyo kwinkqubo.
Itawuli Uyilo luka-Aluvia lukushukumisela ukhukuliseko lwe-alluvial, ukubeka amanzi kwi-silhouettes ezithambileyo ematyeni ngokuhamba kwexesha kunye nokuzingisa; njengamatye esecaleni lomlambo, ukuthoba kunye nejikajika elinobuhlobo kwisicwangciso sokuphatha kuthoba umsebenzisi ekusebenzeni ngaphandle kokuzama. Utshintsho olwenziwe ngobunono luvumela ukukhanya ukuba kuhambe ngokutyibilikayo kwimigangatho, ngaloo ndlela kunika imveliso nganye inkangeleko efanelekileyo.
Illusion Iwebhusayithi Friday 14 May
Smartstreets-Smartbin™ Icuba / Igubu Yebhayidi Thursday 13 May
Shayton Equilibrium Hypercar Wednesday 12 May
Iwotshi Imoto Yedashcam Isitulo I-Vase Into Yokudlala Itawuli